I-China Elahlekileyo kunye nePhantsi yeBhokisi yokuPakisha yeWig okanye uMvelisi weempahla kunye noMxhasi | Ushicilelo loLwazi
Igama lemveliso: isiciko kunye nebhokisi yokupakisha engezantsi yewig okanye impahla yokunxiba
Ubungakanani bangaphandle: 26x13x6.2cm
Ubungakanani bangaphakathi: 25.5 × 12.5x 5.7cm
Isixhobo: I-2mm grey ibhodi egqunywe ngephepha eli-157g
Umbala: mhlophe, usiko
Ubugcisa: istampu eshushu, isiziba se matte
I-FOB port: I-Qingdao, iTianjin, iShanghai, njl
I-MOQ: I-100pcs ye-oda yesiko
UQingdao uLwazi loPrinta ngumenzi webhokisi eQingdao, CHINA. Ngamava ezityebi zemveliso engaphezu kwe-16years, sinokunikezela ngamaxabiso angcono, umgangatho kunye nezitayile zebhokisi onokukhetha kuzo. Ikhadibhodi ebomvu yenza le bhokisi ukuba ibe ntle ngakumbi, ukuba uninzi lwabathengi bayayithanda.
Uyilo → ukubumba → ukuprinta
Umatshini wokushicilela oqhubela phambili kunye neqela lokusebenza elinamava.
Ulawulo olungqingqwa lomgangatho ukusuka kukhetho lwezinto, uvavanyo langaphambi kokuvelisa umatshini ukuya kwimveliso egqityiweyo.
Ngeminyaka yokufakwa kwemveliso yokupakisha, iqela elinobuchule linokuphendula imibuzo yakho ngexesha elifanelekileyo.
Zonke iimveliso zethu zinokushintshwa. Nasiphi na iSIZE, ubume, uyilo, uphawu lunokuhlangabezana neemfuno zakho, singenza yonke into.
Sinokubonelela ngenkonzo yoyilo yasimahla. Ifomathi yobugcisa: IPDF, INDESIGN, AI
(1) iisampulu ezikhoyo zisimahla.
(2) iindleko zesampula ziya kuhlawulelwa iisampuli ezenzelwe wena, ziya kuthi zibuyiswe kwimveliso yobunzima.
(3) ixesha lokubonisa isampulu ziintsuku ezingama-3-5.
4. Izibonelelo zethu
(1) Ixabiso lokukhuphisana
(2) isenzo esikhawulezileyo seesampulu
(3) <iiyure ezingama-24 iimpendulo ezikhawulezileyo.
Q1: Ngaba unoluhlu lwezinto ezisitokhwe ezithengiswayo?
Zonke iimveliso zethu zenziwe kwaye zenziwe ngokwemfuno zabathengi bethu. Bambalwa abanesitokhwe.
Q2: Ngaba ungumvelisi?
Ewe, sinomzi-mveliso wethu kwaye besibonelela ngezisombululo zobuchule kwimveliso yokushicilela kunye nokupakisha ngaphezulu kweminyaka eli-16.
Q3:Ubungakanani bobuncinci beodolo yakho?
Ngokwesiqhelo, i-MOQ yethu ngama-500 ii-pcs, nangona ngamanye amaxesha sivelisa ama-pcs angama-500. Nangona kunjalo, indleko yomyalelo omncinci kunokwenzeka ukuba uphakame kakhulu xa ukopa, ukuprinta, ukuhambisa izixhobo kunye neendleko zokuseta ziqwalaselwa.
Q4: Ndingayifumana njani isampula yokujonga umgangatho wakho?
Emva kokuba ixabiso liqinisekisiwe, unokucela iisampula ukuba ujonge umgangatho wethu. Isimahla isampulu engenanto yokujonga uyilo kunye nomgangatho wephepha, kodwa kuya kufuneka uhlawulele ukuhambisa okubonakalayo.
Kwimveliso yesampulu, siya kusibiza i-usd30-100 yokuhlawula iindleko zokudubula kunye nokuprinta. Ixabiso lokugqibela liya kuqinisekiswa ngokwenkqubo yeimveliso.
Q5: Loluphi ulwazi endifanele ndikuxelele lona ukuba ndifuna ukufumana umnikelo?
1) isitayile sebhokisi
2) ubukhulu beemveliso (ubude × ububanzi × ukuphakama)
I-3) ukunyanga kwezinto kunye nomphezulu
4) Umbala wokuprinta
5) ukuba kunokwenzeka, nceda unike imifanekiso okanye isheke yoyilo. Iisampulu ziya kuba lolona caciso lubalaseleyo, ukuba akunjalo, siya kuphakamisa iinkcukacha zemveliso ezichaphazelekayo ukuze zibhekiswe kuzo.
Q6: Ndingalifumana phi ixabiso?
Sivame ukucaphula kwiiyure ezingama-24 emva kokuba sifumene isicelo sakho. Ukuba ucinezela eli xabiso, nceda usitsalele umnxeba okanye usazise kwi-imeyile yakho ukuba siya kuqwalasela imfuno yakho yophando.
Q I-7: xa sisenza umsebenzi wobugcisa, yeyiphi ifomathi enokusetyenziselwa ukushicilela?
1) I-PDF edumileyo, iCDR, AI, PSD
2) ukopha: 3-5mm
Q8:Zingaphi iintsuku eziza kugqitywa isampula ehleliweyo? Kuthekani ngemveliso yobunzima?
Ngokubanzi iintsuku ezingama-3-5 zomsebenzi zithathwa kwimveliso yesampulu.
Ukwenza amaxesha akhokelela kwimveliso eninzi, ukuthembeka, kuxhomekeke kubuninzi be "oda" kunye "nexesha", kwaye isikhundla sakho "lungelelwano". Sicebisa ukuba uqalise ngokubuza kwiinyanga ezimbini ngaphambi komhla wokuqalisa ukuze ufumane iimpahla kwilizwe lakho.
Q9:Ngaba ukhe wajonga imveliso egqityiweyo?
Ewe, zonke iimveliso zethu ziya kuhamba kwiinkqubo zokuhlola umgangatho.
Q10:Uyithumela njani imveliso egqityiweyo?
3) nge-DHL, i-FedEx, i-UPS, i-TNT, njl.
Edlulileyo: I-White Clamshell Wig Box kunye neRibbon kunye neSatin
Okulandelayo: Flip Ibhokisi yokunxiba ephezulu kunye neMagnethi